CENTRE DES JEUNES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE
- Maison provinciale –
Tarigetra : Manabe ho olom-pirenena vanona sy Kristianina mendrika.
Misahana ny fampivoarana ny mahaolona feno : ara-panahy ; ara-batana, ara-tsaina
Mampiasa fomba fanabeazana manokana dia : ny système préventif
Miorina amin’ny andry telo : Religion - Raison – Bonté Affective.
ORATORIO: Sekoly, tokontany, fianakaviana, fiangonana.
Asa tanana, kilalao, mozika, fampianarana samihafa hamenoana ny fotoana malalaka sy hiarovana ny tanora amin’ny fidonana-poana, hahay miara-monina sy hamoaka ny talentany.
ACTIVITES RECREATIVE : Mercredi et Samedi après-midi
Asa Tanana samihafa, Activités : zaitra; dihy, sports..
APPUI SCOLAIRE : Fanohanana ara-pianarana ny ankizy mianatra amin’ny EPP manodinana :
Cours de soutien journalier
Fampivoarana ny mahaolona
Tanora katolikan’ny diosezy : TA .FI.KA
Sekoly Md st Franois d’Assise Tsiadana
Fitantanana fikambanana Masina :, Fanilon’ i Madagasikara, vovonan’ny ankizy.
Fanarahana ireo tanora mitady ny fiantsoan’Andriamanitra
CENTRE D’ACCEUIL : REUNION ; FORMATION….
Mandray ny olona na vondrona: hivory , hialavoly; , hiofana, hivavaka
Manohana ireo hetsika rehetra mampivoatra sy manaja ny zo mahaolona, sy ny fampivoarana ny ankizy sy ny tanora.
Manohana ireo hetsika rehetra mifanaraka amin’ny toe-tsaina kristianina
II Y Bis Charles de Gaules
101 Antananarivo -(II Arrondiss)-Tèl 26 218 82
etre au courant, à jour de tout